COVID – 19 NESIKHATHI ESINGEZIWE NOBUNZIMA BAMABHIZINISI ASAFUFUSA – Sivubela intuthuko Newspaper
COVID – 19 NESIKHATHI ESINGEZIWE NOBUNZIMA BAMABHIZINISI ASAFUFUSA
COVID - 19 NESIKHATHI ESINGEZIWE NOBUNZIMA BAMABHIZINISI ASAFUFUSA
By admin	 Last updated Apr 13, 2020
Izibalo sesifo esithathelanayo Covid-19 silokhu sikhulile Ningizimu Africa kanye nase africa yokana. Lokho kubesekudala ukuthi uMungameli wakuleli Cyril Ramaphosa aphinde alule isikhathi sokumisa yonke into ngexa yokukhula kwesibalo sabatheleleka ngalesisifo esisifinyelele ku 2173 nasebeshonile abawu 25 .
UMengameli Cyril Ramaphosa wandise ngamasonto amabili okusho ukuthi mhlaka 30 kuMbasa kuyobe sekusuku lokungcina lokuhlala emakhaya.UMongameli uveze nokuthi ukushesha kokumisa yonke into kwaba isiqumo esiphusile esashayelwa ihlombe nayinhlangano yezempilo umhlabawonke – World Health Organisation (WHO) .
UMengameli Cyril Ramaphosa uveze nokuthi imali Unemployment Insurance Fund (UIF) yenyukile ukuze ikwazi ukusiza amabhizinisi akwazi ukukhokhela abasebenzi isuka ku R30 billion iyaku R40 billion. Lemali ebuye ibizwe nge the Temporary Employee/Employer Relief Scheme (TERS), isikwazile ukukhokha imali engango R356 million.
UMengameli Cyril Ramaphosa uphinde waveza ukuthi sekela Mengameli David Mabuza, oNgqogqoshe, osekela Ngqogqoshe bazohola imiholo eyehliswe ngo 33% izinyanga ezintathu zilandelana. Leyomali ezokhathwa koNgqogqoshe izofakwa kwisihwama esilwisana ne Covid 19 esibizwa nge Solidarity Fund.Umengameli ube esecela nosomabhizinisi abazimele ukuthi nabo beze okufanayo ukunikela kwisikhama seSolidarity Fund.
UMnu Shameel Joosub oyisikhulu esiphethe Vodacom eNingizimu Africa usuveze ukuthi uzofaka kulesisikhama Solidarity fund izinyanga ezintathu zilandelana. Vodacom usho nje amabhange amakhulu Ningizimu Africa Nedbank, First Rand and Standard Bank ebesevezile ukuthi nawo azofaka kulesisikhwama seCovid-19 Solidarity Fund.
Isimemezelo sifika ngalesisikhathi sekuqala ithemba kosomabhizinisi abaningi ngoba besekuqala ukuthambisa eminye imigomo njengoba amabhizinisi amancane abantu abadayisa ematafuleni kanye nespaza shop ebesevunyelwe ukudayisa nokuthola izivume kamasipala kuze bekwazi ukuthenga izimpahla emadolobheni.Amasonto amabili angeziwe asasho lukhuni kosomabhizinisi avaliwe ngoba besekukhona ithemba lokuthi mhlaka 16 KuMbasa ayavula kodwa lokho kushabalele.Kunokwezeka futhi amanye amabhizinisi angabe esakwazi ukubuya avule iminyango ngexa yokudonsa kanzima.
Inhlangano yosomabhizinisi abadayisa utshwala baseGoli sebefuna ukuthathela uHulumeni izinyathelo zokumyisa eNkantolo Enkulu yomthethosisekelo uma engabakhululi bedayise utshwala, ngokusho kukaMnu Thabo Modise okhulumela lenhlangano.Lenhlangano enamalunga awu 20,000 abantu abanama tarven kanye nama shebeen iveza ngokusobala ubunzima obubhekene namabhizinisi abantu base malokishini nasemakhaya abhekene nawo.baveza nokuthi uhlelo lokusiza osomabhizinisi alubafaki bona lubashiya ngaphandle. Okweza kubenzima ukuphila ngalesisikhathi kuvaliwe, kodwa abalwisani nemzamo kahulumeni yokwulwisana nalolubhubhane lweCovid-19.
Inhlangano yamatekisi South African National Taxi Council (Santaco) nayo iqalise uhlelo lokusiza kwimboni yamatekisi ukulekelela kulesisikhathi esilahlekile. Ihlele ukubeka imali engango R3.5 billion ukusiza osomatekisi,abashayeli, kanye nabasizi abasebenza ema-ofisi.UMnu Phillip Taaibosch onguMengameli wenhlangano Santaco ekhuluma nezintatheli uthe lemali akuyona yokucebisa abantu kodwa noma ubani engafaka kulesisikhwama esizosiza osomatekisi.
Amanye amabhizinisi awafakiwe ngaphansi kohlelo lokusizakala kodwa fanele ekhokhe rent, akhokhele abasebenzi kanye nokunye ukuze akwazi ukugqubeka avule uma kudlula lesisimo esibhekene nomhlaba wonke.Okunye okuvelayo ukuthi osomabhizinisi basemalokishini nasemakhaya abakakakwazi ukufinyelela kusizo lukahulumeni lohlelo lokubhalisela usizo lwamabhizinisi aphazamiseke ngexa yeCovid-19.
MAYELANA NEMINININGWANE EPHELELE NGOXHASO LWEZAMABHIZINISI
Hotline 0860 663 7867
Email : info@dsbd.gov.za
UThule UMKHANKASO WOKUQWASHISA NGE CORONA EGLEBELANDS
Covid -19 Namabhizinisi Azosebenza Esigabeni Sesine ukuthambisa uthaqa